KIO & KIA | Bayda Institute (Myanmar)
Kachin Independence Organization (KIO/KIA)
ကချင်လူမျိုးတို့သည် ၄င်းတို့ကိုယ်ကို ဂျင်းဖော ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပေါင်းယောင်ဟူ၍လည်းကောင်း ခေါ်ကြသည်။ ကချင်ပြည်နယ်ထဲတွင် ဂျင်ဖောအဖြစ် အသုံးများကြသည်။ ကချင်လူမျိုးမျာတွင် မျိုးနွယ်စုများစွာရှိသည်။ မရူ၊ ဝှီ၊ လရှီ၊ လဝမ် နှင့် နုံ စသည့်အပြင် ဆွေမျိုးအလိုက် ဆင်းသက်မှုများကြောင့် လထော်၊ မရမ်၊ လဖိုင်၊ အင်ခွန်နှင့် အခြားများစွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုများရှိသည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် နိုင်ငံတော်၏ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအရ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၀ နှစ်ပြည့်သည့်အချိန်၌ ခွဲထွက်လိုက ခွဲထွက်နိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ရှမ်း၊ ကရင်စသည့် အခြားတိုင်းရင်းသားများနည်းတူ ကချင်တိုင်းရင်းသားများသည်လည်း ကချင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လမ်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် ကရင့်တော်လှန်ရေးစတင်ချိန်တွင် ကချင်တပ်ရင်း(၁)မှ ဗိုလ်နော်ဆိုင်းနှင့် ၄င်း၏ တပ်ခွဲ၂ ခွဲသည် ကော်သူလေးသို့ ကူးပြောင်းလာကာ ကရင့်တော်လှန်ရေးတွင် အတူလက်တွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ နော်ဆိုင်းသည် ကရင်များနှင့် တစ်နှစ်နီးပါး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီး ကချင်လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ နော်ဆိုင်းသည် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအတွက် ပေါင်းယောင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ကချင်လူမျိုးအများစုနေထိုင်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်၊ နမ္မတူ၊ နမ့်ခမ်း စသည့်နယ်မြေများကို အခြေပြုပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်။ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်ဖြစ်သော နော်ဆိုင်းသည် အဆင်ခြင်မဲ့စွာ လူများအားသတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နော်ဆိုင်း၏တပ်များ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုနိုင်သောကြောင့် တရုတ်ပြည်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။
နော်ဆိုင်း တရုတ်ပြည်သို့ထွက်ပြေးပြီးနောက် လားရှိုးဘက်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်ဇော်ဆိုင်းနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့သည် ကောသူလေးတွင်ဝင်ရောက်ခိုလုံကြပြီး တပ်မှူးနော်ဆိုင်း၏သတင်းကို စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် နော်ဆိုင်းနှင့်အဖွဲ့များသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီထဲ ဝင်သွားကြပြီဟု ကြားသိသောအခါ ကော်သူလေးထံမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲရန် ကချင်ပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။
ဇော်ဆိုင်းသည် ကချင်ပြည်သို့ပြန်လာပြီးနောက် ကချင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့်ဆက်သွယ်ကာ ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် Kachin Independence Organization (KIO)/ Kachin Independence Army (KIA) ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
KIO/KIA ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) ဒူဝါ ဇော်ဆိုင်း – – ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ဒူဝါ ဇော်တူး – – ဒု ဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ဦးလမာရိမ် – – အတွင်းရေးမှူး
ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ –……………………..
(၄) ဇော်တန်(ခ) ဇော်ခင်
(၇) ခန်းဒါ ဘရန်ဂမ်
(၈) နမ်ဆူ ဇော်တောင်
(၁) မရန်ဘရန်ဆိုင်၊ ဇော်မိုင်၊ လုကတန်ဂျီး – – မြစ်ကြီးနား
(၂) ကွမ်ထွဲ၊ မလန်ရှောင် – – ဗန်းမော်
(၃) နမ်ဆူ ဇော်တောင်၊ ဘရန်ဂမ – – ကွတ်ခိုင်
(၄) လမုန်တူးဂျိုင်၊ ဒွမ်ဖော်ဂေါင် – – သိန္နီ
(၅) ဇော်တူး၊ လမာရိမ် – – လားရှိုး
(၆) ဇော်တန်၊ဇော်တူး၊ ပုံရွှေဇော်ဆိုင်း – – မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဆိုပြီး တာဝန်ခွဲဝေ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အစောပိုင်းကာလတွင် KIA ကို တပ်မဟာ (၄)ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ တပ်မဟာ (၃)ခုမှာ ကချင်ပြည်နယ်ထဲတွင်ရှိပြီး၊ အမှတ် (၄) တပ်မဟာသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်းကိုခေါင်းဆောင်ကြသူများမှာ ဘွဲ့ရတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား လူငယ်များဖြစ်မျာဖြစ်ကြသည်။ ယခင်က KIA အဖွဲ့အစည်းကို ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြသူ ညီအစ်ကို ၃ ယောက်ဖြစ်သည့် ဇော်ဆိုင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)ဇော်တူး (ဒု ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဇော်တန် (တပ်မဟာမှူး)၊ စသည်ဖြင့် တာဝန်များကို ခွဲဝေယူခဲ့ကြသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ဇော်ဆိုင်း၊ ဇော်တူး နှင့် အတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့သည် ၄င်းတို့လူများ၏ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဇော်တန်သည်လည်း တိုက်ပွဲတွင်ကျဆုံးခဲ့သည်။
ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ၄ ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်း အဖွဲ့အစည်းပျက်ယွင်းသွားခြင်းမရှိဘဲ တစ်ဗိုလ်ကျ တစ်ဗိုလ်တက်စနစ်ဖြင့် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်းရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ ယခုလက်ရှိ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) သည် တပ်မဟာ (၈)ခုအထိ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ကာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် ဒုတိယ အင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
KIO/ KIA သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကြွယ်ဝသော သယံဇာတများမှ အကျိုးအမြတ်များစွာ ရရှိနေပြီး အဆိုပါ အကျိုးအမြတ်များဖြင့် အင်အားကြီးသော စစ်တပ်တစ်ခုထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အစိုးရနှင့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြား ၁၇ နှစ်ကြာ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်သည် အရပ်သားအစိုးရတက်လာပြီးနောက် သုံးလပင်မကြာမြင့်သည့် အချိန်တွင် အဆုံးသတ်သွားသည်။ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ KIA က နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF) အဖြစ် ပူးပေါင်းရန် ငြင်းဆိုခြင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေးအပေါ် ကန့်ကွက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ KIA အား တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့တွင် KIA ၏ ဆင်ဂန်စခန်အား အစိုးရတပ်မတော်မှ ဝင်ရောက်မတိုက်ခိုက်မီ အချိန်အထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး တည်မြဲနေခဲ့သည်။
KIO/KIA သည် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ( UNFC) နှင့် DPN ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။
KIO/KIA အဖွဲ့အစည်း၏ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း………………….
လန်ယော်ဇောင်းဟရား – KIO ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးကောင်စီ (KIC) ဥက္ကဋ္ဌ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လ- – ဒု ဥက္ကဋ္ဌ(၁)
ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် – – ဒု ဥက္ကဋ္ဌ (၂) (KIC)
ဦးလနန် – – အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
ဗိုလ်မှူးကြီး waw Hkyung Sin Wa- တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး
ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂွမ်ရှောင်- – စစ်ဦးစီးချုပ်
ဗိုလ်မှူးချုပ် ခေါင်လွမ်း – – ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် (၁)
ဗိုလ်မှူးချုပ် အင်ဆန်လ- – ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် (၂)
ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ ……. CRT
၁။ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်ထောင်း (ခေါင်းဆောင်)
၂။ ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး နော်လီ
၃။ ဗိုလ်မှူး တိတ်ဘုန်း
KIA ၏ တပ်မဟာ (၈) ခု ……….
တပ်မဟာ (၁) ပူတာအိုဒေသ
တပ်မဟာ (၂) တနိုင်းဒေသ
တပ်မဟာ (၃) ဗန်မော်ဒေသ
တပ်မဟာ (၄) ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း – ကွတ်ခိုင်
တပ်မဟာ (၅) Sadon ဒေသ
တပ်မဟာ (၆) ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း- မုံးကိုး
တပ်မဟာ (၇) ပန်ဝါဒေသ
တပ်မဟာ (၈) အင်းတော်ကြီးဒေသ တို့ဖြစ်သည်။
ကိုးကား —- ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်း – ဖူးစကောလယ်တော)
—– ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့အစည်း အသင်းအပင်းများ အညွှန်း – ဝင်းတင့်ထွန်း
—– မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပုံဖော်ခြင်း လမ်းညွှန်အကိုးအကား ၂၀၁၆
7points Agreement KIO and Government,Burmese
7points Agreement KIO and Government-eng
interview with kio spoke person
kio releasedastatement on students protest in letpadan
kio releasedastatement on union day